(Gmail Security Settings)
Password ဘာလို့ပြောင်းသင့်လဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ပြောင်းသင့်လဲ
၂။ နှစ်ဆင့်ခံလုံခြုံရေး (2-Step Verification)
နှစ်ဆင့်ခံလုံခြုံရေးကို ဘာလို့ သုံးသင့်တာလဲ?
၃။ သင့်အကောင့်နှင့် ဝင်ထားသည့် ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာစာရင်းကို စစ်ဆေးခြင်း
၄။ ဖုန်းကို ရှာခြင်း (Find your Phone)
အပ်ပလီကေးရှင်းတွေကို နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်အောင် ဘာကြောင့် Google play ဒါမှမဟုတ် App Store ကနေ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တာလဲ?
အပလီကေးရှင်း ရေးတဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီတွေက Google Play Store တို့၊ Apple Store တို့မှာပဲ သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ အပလီကေးရှင်းကို တင်ကြပါတယ်။ တခြားဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ တင်ထားတဲ့ အပလီကေးရှင်း တွေက ဘယ်လောက်ထိ ယုံကြည်လို့ရတယ်ဆိုတာ အတိအကျ ပြောလို့မရပါဘူး။
ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် Facebook ကိုမှ အနက်ရောင်၊ အနီရောင် စသဖြင့် သူရဲ့ မူရင်းအရောင်မဟုတ်ပဲ တခြားအရောင်တွေနဲ့ မြင်ဖူးခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ့အပလီကေးရှင်းတွေက Facebook က တရားဝင်ထုတ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တွေ၊ ဖုန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ အဆက်အသွယ်စာရင်းတွေ၊ သင့် ဓာတ်ပုံ စတာတွေကို သင်မသိနိုင်တဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ကူးယူနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အပလီကေးရှင်းတွေကို တခြားဝဘ်ဆိုဒ်တွေက မယူပဲ Google Play Store တို့၊ Apple Store တို့ကနေ ဒေါင်းယူဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
Android အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ google Play store ကို https://goo.gl/Bjj81m ကနေ သွားနိုင်သလို ဖုန်းမှာ ပါတဲ့ Google Play Store ကို သွားပြီး Gmail ကို ရှာပြီးလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
IOS အသုံးပြုသူတွေက Apple store ကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Gmail ကို သုံးတဲ့အခါမှာ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ သုံးနိုင်ဖို့အတွက် သူရဲ့ လုံခြုံရေး အင်္ဂါရပ်မှာ ဘာတွေ ပါတယ်ဆိုတာကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ အကြံတစ်ခုပေးချင်တာကတော့ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး လုံခြုံရေးအပြင်အဆင်တွေကို သုံးဖို့အတွက် သူတို့ဘက်က နောက်ဆုံး ထုတ်လိုက်တဲ့ အပလီကေးရှင်းကို သုံးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အပလီကေးရှင်းတိုင်းကို တရားဝင်တင်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေကပဲ ရယူ အသုံးပြုဖို့ ထပ်ပြီး တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Gmail ရဲ့ လုံခြုံရေး အပြင်အဆင်တွေထဲကနေ
သင့်အကောင့်နဲ့ ဝင်ထားတဲ့ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာစာရင်းကို စစ်ဆေးတဲ့ အကြောင်းနဲ့
ဖုန်းရှာလို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေ အကြောင်းတွေကို ပြောပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စကားဝှက်ကို စကားစုအနေနဲ့ ကျ
စကားဝှက်တွေ ပေးပြီဆိုရင် သင့်ရဲ့ မွေးနေ့၊ နာမည်၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ နာမည် ၊ username အတိုင်းပဲ ကို စကားဝှက်မှာလည်း အတူတူပြန်ပေးတာ၊ ဂဏန်းတွေကို အစဉ်လိုက် ( 1234 ) ပေးတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ပန်းစကားလုံးသုံးလုံးနဲ့အထက် တွဲပြီး ပေးတာမျိုးက ပိုပြီးအားကောင်းစေပါတယ်။ ဥပမာ - RiverCountryShoesPowerSocket
သင့်အကောင့်ရဲ့ လုံခြုံရေးအားနည်းနေပြီ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့် password ကို သိနေတယ်ဆိုရင်
သင့်ရဲ့ ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာတို့ ပျောက်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ရဲ့ အီးမေးလ်တွေကို ဝင်ဖတ်နေတယ်လို့ သံသယရှိတယ်ဆိုရင်
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အကောင့်ကို ဟက်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်
သင့်အကောင့်ရဲ့ စကားဝှက်ကို ပြောင်းသင့်ပါတယ်။ စကားဝှက်တွေကို အနည်းဆုံး ၆ လ တစ်ခါ ပြောင်းဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
စကားဝှက်ကို ပြောင်းဖို့အတွက် အောက်မှာ ပြောပြထားတဲ့အတိုင်း လုပ်လို့ရပါတယ်။
သင့်ဖုန်းထဲက Browser (Firefox, Firefox Focus, Chrome) ကို ဖွင့်ပါ။
myaccount.google.com ကို ဝင်ပြီး သင့်အကောင့်ရဲ့ Username နဲ့ Password ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
Sign-in and security ကို ဝင်ပြီး Password ကို ဝင်ပါ။
အသစ်ပြောင်းချင်တဲ့ စကားဝှက်ကို နှစ်ခါ ရိုက်ထည့်ပြီး Change Password ကို နှိပ်ပါ။
နှစ်ဆင့်ခံလုံခြုံရေးစနစ် (သို့မဟုတ် 2FA ) ဆိုတာကတော့ အသုံးပြုသူကနေပြီး ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို သုံးတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကို အတည်ပြုဖို့အတွက် မတူညီတဲ့ အဆင့်နှစ်ဆင့်ပေါင်းပြီး အတည်ပြုရတဲ့ နည်းလမ်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ စနစ်က
နှစ်ဆင့်ခံလုံခြုံရေး ကို အတည်ပြုတဲ့နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အတည်ပြုတာ၊ Recovery code တွေနဲ့ အတည်ပြုတာ၊ တခြား အပလီကေးရှင်းတွေကို သုံးပြီး အတည်ပြုတာ စသဖြင့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် နှစ်ဆင့်ခံလုံခြုံရေးအကြောင်း အသေးစိတ်ရေးထားတာကို သွားဖတ်စေလိုပါတယ် (အောက်မှာ လင့်ခ်ပေးထားပါတယ်)။ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ အလုပ်သဘောသဘာဝအရ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဥ်းစားပြီး သင့်အတွက် အလုံခြုံဆုံးဖြစ်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ရွေးစေချင်ပါတယ်။
နှစ်ဆင့်ခံလုံခြုံရေးက သင့်အကောင့်ကို ဝင်ဖို့အတွက် အတည်ပြုတဲ့နေရာမှာ နည်းလမ်းတစ်ခုထက်ပိုပြီး လိုအပ်တဲ့အတွက် အကောင့်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ပိုအားကောင်းစေပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်စကားဝှက်ကို သိနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ သင့်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် တစ်ခါသုံး အရန်အတည်ပြုကုတ် မရှိရင် အကောင့်ကို ဝင်လို့ မရပါဘူး။
နှစ်ဆင့်ခံလုံခြုံရေးရဲ့ အကြောင်းကို ပိုသိချင်ရင် ဒီမှာ (http://bit.ly/about2fa) သွားပြီး အသေးစိတ် ဖတ်လို့ရပါတယ်။
လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ မျှားလေးရဲ့ အမှတ်စဉ်အတိုင်း အဆင့်ဆင့် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်အကောင့် အပြင်အဆင် (settings) ကို ဝင်ဖို့
Sign-in and security ကို ဝင်ပြီး 2-Step Verification ကို ဝင်ပါ။
4. Get Started ကို နှိပ်ပါ။
5. သင် ဟုတ်၊ မဟုတ် ကို အတည်ပြုဖို့အတွက် စကားဝှက်ကို နောက်တစ်ခေါက် ရိုက်ထည့်ပါ။
6. သင့်ရဲ့ ဖုန်းကနေ အတည်ပြုဖို့အတွက် Try it now ကို နှိပ်ပါ။
7. ဖုန်းမှာ ဒီမော်ဒယ်ဖုန်းကနေ ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာ သင် ဟုတ်၊ မဟုတ် အတည်ပြုပါဆိုတဲ့ စာ ဝင်လာတဲ့အခါ (ဟုတ်တယ်ဆိုရင်) Yes ကို နှိပ်ပါ။
8. နှစ်ဆင့်ခံလုံခြုံရေးစနစ်ရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တော်တော်များများက ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ကို ထည့်ပေးရပါတယ်။ အဲ့အတွက် နောက်တစ်ဆင့်မှာ သင် အသုံးပြုလိုတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါ။
9. သင့်ဖုန်းထဲကို အတည်ပြုကုတ်ဝင်လာတဲ့အခါ ရိုက်ထည့်ပါ။
10. Turn on ကို နှိပ်ပါ။
11. အခု ပုံစံအတိုင်းဆိုရင် သင် ဝင်ထားပြီးသား မဟုတ်တဲ့ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာကနေ ဝင်တာ၊ Logout လုပ်လိုက်ပြီး ပြန်ဝင်တဲ့အခါ သင့်ဖုန်းကို အတည်ပြုကုတ်ပို့ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းက သင်နဲ့ အတူ ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဖုန်းပျောက်သွားရင် အကောင့်ထဲကို ဝင်လို့မရ ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ အရံကုတ်တွေကို သိမ်းထားဖို့အတွက်ပါပဲ။ (ဖုန်းထဲမှာပဲ သိမ်းထားရင်တော့ ဖုန်းပျောက်ရင် ဘာမှ ထူးမှာ မဟုတ်ပါဘူး)
အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက် Turn on လုပ်ပြီးတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းရဲ့ နာမည်အောက်မှာ Backup codes ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
ကုတ်တစ်ခုက တစ်ခါဝင်ပြီးပြီဆိုရင် အဲဒီ့ကုတ်နဲ့ နောက်တစ်ခါ ဝင်လို့ မရပါဘူး။ ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် တခြားအတည်ပြုတဲ့ စက်ပစ္စည်း ပျောက်မှာစိုးရိမ်တယ်ဆိုရင် အတည်ပြုကုတ်တွေကို ပရင့်ထုတ်ပြီး သွားလေရာကို ယူသွားလို့ ရပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီ့ကုတ်တွေက အသုံးပြုသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာ အနေနဲ့ ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ပရင့်ထုတ်ပြီး သိမ်းထားမယ်ဆိုရင် သတိထားဖို့လိုတာကတော့ ဘယ်သူကမှ ယူသွားလို့မရတဲ့ လုံလုံခြုံခြုံနေရာတစ်ခုမှာ သိမ်းထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ထုတ်ထားပြီးသား ကုတ်တွေ ပျောက်သွားတယ် ဒါမှမဟုတ် အကုန်လုံးကို သုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် သင် ဝင်ထားပြီးသား အကောင့်ကနေ နောက်ထပ်ကုတ်တွေကို ထပ်ထုတ်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်။
စစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သင့်ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ ပျောက်သွားတဲ့အခါမှ မဟုတ်ဘဲ အခုလောလောဆယ်မှာ သင့်အကောင့်နဲ့ သင်မသိဘဲ အသုံးပြုနေတာတွေ ရှိလားဆိုတာကိုလည်း စစ်ဆေးလို့ ရပါတယ်။
(၁) သုံးနေတဲ့ ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ ပျောက်သွားတယ်၊ ပျက်သွားတယ်၊ မသုံးတော့ဘူးဆိုရင် Sign-in & security ထဲက Device activity & security events ကို သွားပြီး ဖယ်လိုက်လို့ ရပါတယ်။
Gmail လုံခြုံရေးအပြင်အဆင်တွေထဲက နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဖုန်းပျောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင် ဘယ်ကို ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို စစ်လို့ရတဲ့ Find your phone ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့် ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာတွေ ပျောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်၊ အကောင့်နဲ့ ဖုန်းထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင်
Find my phone ကနေ တဆင့် ဖုန်းကို Try calling your phone (ဖုန်းအသံမည်အောင် လုပ်တာ)၊ Lock your phone (ဖုန်းကို လော့ချလိုက်တာ)၊ နောက်ဆုံး ဖုန်းထဲက အချက်အလက်တွေကို ဖျက်လိုက်တာ (Consider erasing your phone) လုပ်လို့ရပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ဖုန်းက အင်တာနက်နဲ့ မချိတ်ထားဘူးဆိုရင် Device activity & security events ကို သွားပြီး ပျောက်သွားတဲ့ ဖုန်းကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့။